KAMIAO NANDONA SARETY : Nitolo-batana ilay mpamily kamiao nahafaty olona
Lehilahy iray, sahabo 27 taona, no notanan’ny polisy misahana manokana ny lozam-pifamoivoizana ny zoma 09 aogositra 2019 teo rehefa avy nandona sarety maromaro teny amin’ny Fasan’ny Karàna, ka nahafatesana olona iray. 13 août 2019
Raha tsiahivina dia ny alarobia 07 aogositra 2019 lasa teo tokony ho tamin’ny 12 ora sasany alina no nitrangan’ity lozam-pifamoivoizana ity teo amin’ny Fasan’ny Karàna. Kamiao iray izay voalaza fa avy avy any Vontovorona nentin’ny mpamily haterina any amin’ny orinasa iasany eny By-Pass no nifanena tampoka tamina fiara hafa. Tsy nahatana ny familiana ilay mpamily kamiao ka nifatratra avy hatrany tamina sarety miisa enina nipetraka teo amoron-dalana.
Lasa nandositra avy hatrany moa ity kamiao ity rehefa avy nandona ireo sarety ireo. Fotoana fohy taty aoriana dia tonga teny an-toerana ny polisy nizaha ny zava-nitranga. Tamin’izany no nahitana ny vata-mangatsiakana lehilahy iray tao anatin’ny iray tamin’ireo sarety voadona ireo. Fantatra fa mpiambina sy mpitarika sarety eny an-toerana ity tovolahy hita faty ity.
Natory tao anatin’ilay sarety izy io tamin’ny fotoana nitrangan’ny loza ary dia nindaosin’ny fahafatesana satria voapotsitra tao. Nizotra hatrany ny fanadihadiana ka nokarohina ilay kamiao nahavanon-doza izay, ny zoma 09 aogositra 2019 teo no nitolo-batana teo anivon’ny Polisy misahana manokana ny lozam-pifamoivoizana ilay mpamily. Niaiky ho nandona ireo sarety ireo izy nandritra ny fanadihadiana azy. Natolotra ny Fampanoavana, omaly alatsinainy 12 aogositra 2019 ny raharaha.